Ngoku I-jw.org Ifumaneka Ngeelwimi Ezingaphezu Kweziyi-300!
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI IPidgin yaseSolomon Islands ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBislama IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga (SaseMalawi) IsiChitumbuka IsiChol IsiChuvash IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEwe IsiFante IsiFinnish IsiFrentshi IsiGalician IsiGeorgia IsiGrike IsiGun IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKabyle IsiKannada IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiKpelle IsiKrio IsiLithuania IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMam IsiMingrelian IsiMyanmar IsiNahuatl (saseCentral) IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiOromo IsiOssetia IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTajiki IsiTankarana IsiTarascan IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTojolabal IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTzeltal IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUzbek IsiValencian IsiVezo IsiWelsh IsiXhosa IsiZulu isiWallisian
Ukuba ucofa kuluhlu olubonisa iilwimi onokuzifunda ngayo i-jw.org, uya kufumanisa ukuba kukho iilwimi ezingaphezu kweziyi-300 onokukhetha kuzo—nto leyo engaqhelekanga kwiiwebhsayithi ezininzi!
Eli nani lingakanani xa lithelekiswa nezinye iiwebhsayithi ezidumileyo? Ukususela ngoJulayi 2013 iwebhsayithi yeUnited Nations ibifumaneka ngeelwimi ezintandathu. Iwebhsayithi esemthethweni yeEuropean Union, iEuropa, ibifumaneka ngeelwimi eziyi-24. IGoogle yona ibifumaneka ngeelwimi eziyi-71 ngoxa iWikipedia ifumaneka ngeziyi-287.
Kuthatha ixesha elide ukuguqulela iwebhsayithi ifumaneke ngeelwimi ezingaphezu kweziyi- 300! Uninzi lwalo msebenzi wenziwa ngamaNgqina kaYehova asasazeke kumazwe amaninzi nafuna ukudumisa uYehova. Ngobuchule la maqela aguqulela isiNgesi siye kwiilwimi zawo.
I-jw.org inenkcazelo eninzi eguqulelwa ngeelwimi ezingaphezu kweziyi-300, ngenxa yoko ewonke amaphepha akule webhsayithi angaphezu kwe-200 000!
Le webhsayithi ayaneli nje ukufumaneka kwiindawo ezininzi kodwa idume nokuduma. Oku kuboniswe lolunye uhlolisiso olwenziwe yinkampani ejongene neeWebhsayithi iAlexa. Le nkampani inomxholo othi, “Iinkonzo Nonqulo,” ibe phantsi kwawo kukho uludwe lweewebhsayithi ezimalunga ne-87 000, eziquka ezeenkonzo ezinkulu, amalungu azo neminye imibutho eyeleleneyo. Ukususela ngoJulayi 2013, i-jw.org iye yakwindawo yesibini kolu ludwe! Eyokuqala yenye iwebhsayithi eneenguqulelo zeBhayibhile eziliqela.
Ukususela ngo-Oktobha 2013, i-jw.org iye yavulwa ngabantu izihlandlo ezingaphezu kwe-890 000 suku ngalunye. Siza kuqhubeka sikhupha amacebiso asebenzisekayo asuka eBhayibhileni simahla, ukuze abantu bawafumane kungakhathaliseki apho bakhoyo.
I-JW.ORG—Iphucula Ubomi Babantu